ရောင်းရန် - ပထမထပ်တိုက်ခန်း
အထက်ပါဈေးနှုန်းမှာ အခန်းဖွဲ့ပြီး၊ ပါကေးခင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။...
အထက်ပါဈေးနှုန်းမှာ အခန်းဖွဲ့ပြီး၊ ပါကေးခင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Listed7June 2018
Property ID: S-1016904
Asking Price : 800 သိန်း
ရောင်းရန် - မြေညီထပ်
ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးနှစ်ရှည်အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ၃နှစ်မှ၁၅နှစ်အထိ ဆက်သွယ်ရန် ၀၉၄၃၀၉၅၁၉၆, ၀၉၉၆၁၂၀၈၂၇၈ , ၀၉-၉၅၂၅၅၅၉၀၅...
ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးနှစ်ရှည်အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ၃နှစ်မှ၁၅နှစ်အထိ ဆက်သွယ်ရန် ၀၉၄၃၀၉၅၁၉၆, ၀၉၉၆၁၂၀၈၂၇၈ , ၀၉-၉၅၂၅၅၅၉၀၅
Listed3June 2018
Hla Myat Yadanar
Advertiser : Hla Myat Yadanar
Property ID: S-1045515
Asking Price : 3,000 သိန်း
Mobile : 09952555905
Listed 1 June 2018
Property ID: S-1045581
Asking Price : 1,500 သိန်း
ရောင်းရန် - KRK Engineering & Construction CO.,LTD မှ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးနေတဲ့…
• Down Payment on Agreement 20% • Piling Work 10% • 1st Floor Complete 10% • 3rd Floor Complete 10% • 5th Floor Complete 10% • 7th Floor Complete 10% • Penthouse Complete 10% • Finishing Work 15% • Handover 5% No.(2), Myitta Road, South Okkalapa, Yangon. ...
• Down Payment on Agreement 20% • Piling Work 10% • 1st Floor Complete 10% • 3rd Floor Complete 10% • 5th Floor Complete 10% • 7th Floor Complete 10% • Penthouse Complete 10% • Finishing Work 15% • Handover 5% No.(2), Myitta Road, South Okkalapa, Yangon.
Advertiser : KRK
Property ID: S-1022066
Asking Price : 1,250 သိန်း
Mobile : 09-77827778, 09795995313,
Office no : 09-5193070, 09-5064891
Property ID: S-1022065
Asking Price : 1,350 သိန်း
Listed 17 May 2018
Property ID: S-1022067
Asking Price : 1,100 သိန်း
Listed 22 April 2018
Property ID: S-1022064
ရောင်းရန် - မြေညီထပ်+ထပ်ခိုးပါ
* မြေညီထပ် + ထပ်ခိ်ုး အမြင့် (၁၇)ပေ ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးနှစ်ရှည်အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ၃နှစ်မှ၁၅နှစ်အထိ ဆက်သွယ်ရန်…...
* မြေညီထပ် + ထပ်ခိ်ုး အမြင့် (၁၇)ပေ ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးနှစ်ရှည်အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ၃နှစ်မှ၁၅နှစ်အထိ ဆက်သွယ်ရန်…
Listed3April 2018
Property ID: S-1045512
ရောင်းရန် - တတိယထပ်
Property ID: S-1016906
Asking Price : 600 သိန်း
Listed2April 2018
Property ID: S-1022071
Listed 26 March 2018
Property ID: S-1022073
ရောင်းရန် - မြေညီထပ် တိုက်ခန်း
(၁၇) ပေ အမြင့်၊ ထပ်ခိုး တ၀က်ပါ။ အထက်ပါဈေးနှုန်းမှာ အခန်းဖွဲ့ပြီး၊ ပါကေးခင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။...
(၁၇) ပေ အမြင့်၊ ထပ်ခိုး တ၀က်ပါ။ အထက်ပါဈေးနှုန်းမှာ အခန်းဖွဲ့ပြီး၊ ပါကေးခင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Listed 24 March 2018
Property ID: S-1016903
ရောင်းရန် - စတုတ္ထထပ် တိုက်ခန်း
Listed2March 2018
Property ID: S-1016907
ရောင်းရန် - ဒုတိယထပ်
Listed 28 February 2018
Property ID: S-1016905
Asking Price : 700 သိန်း
ရောင်းရန် - ၆ လွှာ
# အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ညှိနှိုင်းဝယ်ယူနိုင်သည် ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးနှစ်ရှည်အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ၃နှစ်မှ၁၅နှစ်အထိ…...
# အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ညှိနှိုင်းဝယ်ယူနိုင်သည် ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးနှစ်ရှည်အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ၃နှစ်မှ၁၅နှစ်အထိ…
Listed 23 February 2018
Property ID: S-1045520
ရောင်းရန် - ပဉ္စမထပ် တိုက်ခန်း
Listed 21 February 2018
Property ID: S-1016908
Listed 11 February 2018
Property ID: S-1022074
Asking Price : 1,000 သိန်း
Listed 8 February 2018
Property ID: S-1022069
Listed3February 2018
Property ID: S-1022072